P.Ti October 29, 2009 at 1:58 PM
အမသက်ဝေရဲ့ အရေးအသားကောင်း နဲ့ ကောင်းကောင်းခံစားလို့ရပါတယ်...
အတူတူဆိုရင်... ဆိုတာတွေ ချစ်တဲ့သူနဲ့ အတူတကွ ပျော်ရွှင်စွာလုပ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် အမသက်ဝေရဲ့ သူငယ်ချင်းကို... :)
Rita October 29, 2009 at 2:06 PM
စိတ်ကူးယဉ်မိစေတဲ့ ပို့စ် ကလေး။
ရုံးမှာ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ကြားက အဲလက်စ် သီချင်းကို စိတ်ထဲက ညည်းရင်း ဖတ်မိတယ်။
(... လူတွေနဲ့ ဝေးတဲ့နေရာမှာ ဆုံနိုင်ဖို့ တစ်ခုသာ ကျန်တော့ရင် ...)
မှန်တာ ဝန်ခံရရင်တော့ ဘာကိုမှ မမျှော်လင့်ချင်တော့။
ဒဏ္ဍာရီ October 29, 2009 at 2:20 PM
မသက်ဝေရဲ့ ပိုစ့်လေးကိုဖတ်ရင်း ချစ်တဲ့သူတွေ အတူတကွ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့ ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ တစ်ထပ်တည်း ကျနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အမမွန်ကတော့သူ့ ငါးကျော်ကို ပြောသွားတယ်..
ချစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အခုအချိန်ထိ အကျွမ်းဝင်မရှိသေးတာမို့ ငေးရုံလေးပဲငေးသွားတယ်ခင်ဗျ
Nge Naing October 29, 2009 at 2:50 PM
စဖတ်တုန်းက အဆုံးထိ ဖတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက် မရှိခဲ့တာအမှန်ပဲ။ ဒါပေယ့် အရေးအသားကောင်းလွန်းလို့ အဆုံးထိ ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်။ ချစ်သူနှစ်ဦး လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
မီယာ October 29, 2009 at 3:31 PM
life is so short... လို့ တွေးမိတဲ့အခါ အတူတူနေဖို့ တားဆီးထားတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေ စည်းခြားထားတဲ့ နံရံတွေကို ကျော်နိုင်တဲ့ ခွန်အားတွေနဲ့ ပြည့်လာပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးချင်တယ်
rose of sharon October 29, 2009 at 10:16 PM
ရွှေဂျမ်း October 30, 2009 at 12:57 AM
ချစ်သူတွေ အတူတူဆုံနိုင်ကြဖို့ လာဆုတောင်းပေးပါတယ် မသက်ဝေ။ ရေးတာကောင်းလွန်းလို့ အရမ်းခံစားရပါတယ်။
PAUK October 30, 2009 at 1:13 AM
အရေးအသားက အထူးပြောစရာ မလိုပါ။။
pandora October 30, 2009 at 6:35 AM
ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အားလုံးပျော်ဖို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ :)
TM October 30, 2009 at 8:11 AM
ပုံရိပ် / Pon Yate October 30, 2009 at 9:15 AM
ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ကြည်နူးစရာ၊ လွမ်းမောစရာလေးတွေပါ။
nu-san October 30, 2009 at 11:28 AM
မမစာရေးကောင်းလိုက်တာ.. “အတူတူဆိုရင်” ဆိုတဲ့ စာသားလေး မြင်လိုက်တော့ ၀ိုင်ဝိုင်းနဲ့တင်ဇာမော်လား မသိဘူး.. သူတို့ဆိုထားတဲ့ အတူတူဆိုရင် သီချင်းလေးကို သတိရမိတယ်.. :)
Waing October 30, 2009 at 12:37 PM
သူငယ်ချင်း၂ဦးရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ လက်တွေ့ တစ်ထပ်တည်းကျပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
I wish ... they will get happy ending.
တန်ခူး October 30, 2009 at 3:50 PM
သက်ဝေရဲ့ ချောမွေ့ ဆွဲဆောင်တဲ့အရေးအသားကြောင့်ဖတ်ရင်းနဲ့ကိုယ်ပါမျောဝင်သွားတယ်…
သူတို့ နှစ်ဦးနီးကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်သက်ဝေ…
ဒါပေမယ့် တနေရာမှာ သက်ဝေရေးခဲ့တာလေး ဖတ်ပြီး
“သို့သော်လည်း ကိုယ့်မှာ ရှိမနေသော ကန့်သတ်ချက်မျိုးတွေ သူမဆီမှာ ရှိနေသည်။ ကိုယ့်မှာ ရှိမနေသော တာဝန်ဝတ္တရားတွေ သူမဆီမှာ ရှိနေသည်။ ကိုယ့်မှာ ရှိမနေသော ထောက်ထား ငဲ့ညှာစရာတွေ သူမဆီမှာ ရှိနေသည်။ ထို့အပြင် ရိုက်ချိုး ဖျက်ဆီး၍မရနိုင်သော နံရံတံတိုင်း တခုလဲ သူမနှင့်အတူ အခိုင်အမာ ရှိနေလေသည်။”
တကယ်လို့ များ သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ငဲ့ညာထောက်ထားစရာဟာ တခြားတယောက်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားမဟုတ်ခဲ့ရင်... သိပ်ချစ်ကြသူနှစ်ဦးအမြန်ဆုံးနီးကြပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ် သက်ဝေရယ်….
Moe Cho Thinn October 31, 2009 at 9:18 AM
အပြစ်ကင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းတိုင်း အမြန်ဆုံး ဆုံဆည်းနိုင်ပါစေ။
သူများကို ခံစားနားလည်ပေးတဲ့ မမ သက်ဝေလဲ ပျော်ရွှင် ကြည်နူးရပါစေ။
Hmoo October 31, 2009 at 1:08 PM
Really nice & hit....
သက်ဝေ November 7, 2009 at 2:34 PM
လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ ကိုယ်စီဘဝတွေမှာ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ ချစ်ခြင်းကိုသာ အလိုရှိကြ တောင့်တကြစမြဲ ဖြစ်ပေမယ့် တခါတခါမှာ ကြိုတင်မမြင်နိုင်တဲ့ တထောင့် တနေရာကနေ သူ့အလိုလို ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ ချစ်ခြင်းတွေလဲ ရှိနေတတ်တာမို့...
သူငယ်ချင်းကို ချစ်ခင် ကြင်နာတဲ့စိတ်နဲ့ ဒီပိုစ့်လေးကို အမှတ်တရ ရေးဖြစ်ပါတယ်...။
ချစ်ခင်စွာ အားပေးသွားကြတဲ့သူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးပါ။ ကိုယ်တိုင်သိနေတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးတခုမို့လဲ ဒီလောက် ရေးနိုင်သွားတာပါ။
ဆုတောင်း စကားတွေအတွက်လဲ သူငယ်ချင်းက ပြောမပြတတ်အောင် ကျေးဇူးတင် ဝမ်းသာမိပါတယ်တဲ့...။
ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ကလဲ သူ့တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆန္ဒတွေ အတွေးစိတ်ကူးတွေ အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ တချိန်မှာ ကြည်နူး ပျော်ရွှင်စရာ ပိုစ့်လေးတခုကိုလဲ အမှတ်တရ ရေးခွင့်ရချင်ပါသေးတယ်...။
ထူးအိမ်သင်ရဲ့ ဇာတ်ပေါင်းခန်း ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ အတူပေါ့...
Hmoo November 9, 2009 at 11:54 AM
The more you live with ...."who" you love :)
မမသီရိ November 24, 2009 at 6:25 PM
မမ ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာတပုဒ်ရဲ့ comment မှာ
တယောက်က ဒီ link လေးထားပြီး သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါလားဆို့လို့ လာဖတ်တာ
သည်အတွေးနဲ့ အရေးထဲ နစ်မျောနေမိတာ အချိန်တွေ ဘယ်လောက်ကြာသွားခဲ့ သလဲ.. သတိမထား မိတော့ ဘူး
အစ အဆုံး အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ဖတ်ရင်း.. တစုံ တရာ အတွက်
ကြေကွဲ သလိုလို.. ကြည်နူးသလိုလို.. ပြီးတော့ ဘယ်လို ပြောရမှန်းမသိတဲ့ ခံစားချက်တွေပါ ပေါ်လာခဲ့တယ်
အရမ်းကောင်းတယ် .. သက်ဝေ
အဲဒီချစ်သူ နှစ်ဦး တနေ့နေ့ မှာ ဆုံ ပါစေ လို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းပါတယ်
ညီမလေး November 29, 2010 at 6:46 PM
ပို့စ်ကော ကွန်မန့်တွေကိုကော သဘောကျမိတယ် ...